काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै हिजोआज, धुँवा धूलो उडेको, बाटोभरि फोहोर थुपारिएको, ढल बग्ने खोला, जाम हुने नाली, पानी नआउने धारा आदि इत्यादि याद आउँछ । हुन पनि हो, धुलो उडेको र फोहोर थुप्रिएको या भनौँ फोहोर को गन्ध ह्वास्स नाक मा ठोक्कियो भने, आँखा चिम्लेरै काठमाडौँ आइपुग्यो भन्ने जाने हुन्छ । चाहे वानेश्वर होस्, या न्युरोड वा दरबार मार्ग नै किन नहोस्, फोहोर को डंगुर भेटिन्छन्, बाटो भरि, फुटपाथ बाट हिँड्न पनि गाह्रो ! अझ खोला छेवैछेउ बनेको बाटो बाट त हिँड्छु भनेर नचिताएपनि हुन्छ । खोला कालो देखिन्छ, त्यसमाथि उस्तै नमिठो गन्ध, जति नै नाक थुनेपनि त्यसको गन्ध सिधै नाकबाट माथि मष्तिष्क मा पुग्छ । तर आज म एउटा अचम्म को कुरा देखाउँदैछु । जब मैले देखेँ म त छक्क परेँ, अरे यस्तो पनि हुन्छ काठमाडौँ मा ? काठमाडौँ को नाली मा पानी पनि बग्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, नाली भन्नेबित्तिकै फोहोर थुप्रिएर पानी नबग्ने नाली को याद आउँथ्यो तर जब यो देखेँ तब सबैतिर एकैनास हुँदैन रहेछ भन्ने लाग्यो । साँच्चै भन्दा, काठमाडौँ मा पहिलोपटक मैले यस्तो नाली देखेँ जहाँ संङ्लो पानि बगिरहेको थियो । यो देख्दा सपना हो कि, जस्तो पनि
Listen to Banira Giri's Karagar : Episode-2 "प्रकाशको निम्ति प्वाँख बेच्छन् बत्ति नगिचका डाँठहरु, विलासका निम्ति सबथोक बेच्छन् महल निवासी स्वाँठहरु, वरदान को निम्ति गर्दन बेच्छन् सिंङ्ग उम्रेका बोकाहरु, ज्यानका निम्ति केन बेचुन् हामी जस्ता भोकाहरु ।" हाँस्यव्यङ्ग्यकार 'भैरव अर्याल' को कविता सँगै सुरुहुने आजको रेडियोवाचन को यो नयाँ श्रृंखला मा हाम्रा चिरपरिचित रेडियो प्रस्तोता अच्युत घिमिरे डा. वानिरा गिरी को चर्चित उपन्यास 'कारागार' को दोश्रो अंक वाचन गर्दैहुनुहुन्छ । आज को यो श्रृंखला मा प्रविधिमा दिलिप ज्योती ले साथ दिइरहनुभएको छ । डा. वानिरा गिरी को उपन्यास 'कारागार' मा कुनैपनि पात्रहरु को नाम दिइएको छैन । वास्तविकतामा कैदीलाई थुनिने ठाउँ कारागार हो तर केही अन्तर्मुखीहरु आफैँ कारागार मा परेको अनुभव गर्छन् । यस्तै यस्तै प्रौढानारी को भावनालाई यो उपन्यास मार्फत उजागर गरिएको छ । उपन्यास को मज्जा लिन त, तपाई ले सुन्नै पर्छ, रेडियोवाचनमा, कारागार का अंकहरु !
ए एक्युरियम का माछाहरु तिम्रो अस्तित्व केबल सिसा को बन्द घेरा भित्र मात्र सिमित छ । तिमी रंगिबिरङ्गी छौ तर केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र यति नै हो तिम्रो अस्तित्व त्यहाँ भन्दा बाहिर तिमी कहिल्यै आउन सक्दैनौ किनकी तिमी पानी बिना बाँच्नै सक्दैनौ पानी तिम्रो घर हो खाने भाँडो हो त्यसैले त होला तिमी पानी विमुख हुनेबित्तिकै छट्पटाउन थाल्दछौ उफ्रन थाल्छौ पुच्छर ले वरपर हिर्काउन थाल्छौ किनकी तिमी आफ्नो मात्र सोच्छौ । तिम्रो उफ्राइले कति किट मरे होलान् तिम्रो छटपटाइले कतिलाई पेल्यौ होला तर तिमी महान छौ त्यसैले त तिमीलाई छानि छानि एक्युरियम मा राखेकाछौँ । तिमी मा उत्पादकत्व छैन सृजनशिलता छैन केबल छ त घमन्ड सेतो, कालो, हरियो, निलो, रातो हुनुको । परिवर्तन हुनु छ भने घमन्ड छोड अनि पानी बिना पनि बाँच्न सिक अनि तिमी महान हुनेछौ विश्वव्यापी हुनेछौ र प्रेरणाको स्रोत पनि नत्र फगत जन्मनु र मर्नुबाहेक केही अस्तित्व रहने छैन केही रहने छैन । नोट: एक्युरियम ले संसद/संविधानसभा भवन जनाउँछ भने माछाहरु ले हाम्रा संसद/सभासद जनाउँछ । imgsrc: mydigitallife.info
When I born, I black When I grow up, I black When I go in Sun, I black When I scared, I black When I sick, I black And when I die, I still black And you white fellow When you born, you pink When you grow up, you white When you go in sun, you red When you cold, you blue When you scared, you yellow When you sick, you green And when you die, you gray And you calling me colored? Note: I've got this piece of poem in my email. As email says, this poem was nominated by the United Nations as the best poem of 2008 & it was written by an African Kid. imgsrc: karamaureen.com
मकवानपुर गढी, इतिहासमा ठूलो प्रभाव रहेको तर अहिले एउटा भग्नावशेष मात्र । करिब १ महिना अघि जति मकवानपुर गढि सम्म पुगिएकोथियो, ख्यालख्याल मै ! हेटौँडा बाट करिब १५-१६ किलोमिटर पूर्वमा महाभारत डाँडा को टुप्पामा मकवानपुर गढि रहेको छ । नेपाल को एकिकरण हुनुपुर्व को एक शक्तिशाली राज्य, अनि त्यहाँ का सेन वंशीहरुले राज्य गर्थे भनेर खुबै पढिएको थियो । अस्ति को छुट्टि मा हेटौँडा पुग्दा, भाइ विवेक ले गढि जाउँ भन्यो, उसले भन्नेबित्तिकै मलाई हतार लागिहाल्यो, धेरै पहिलेदेखि जान मन लागेर पनि नगएको ठाउँ भएकोले, अनि अझ दरबार, ब्यारेक भनेपछि शनिबार को दिन गइयो, मकवानपुर गढिमा, एउटा भग्नावशेष भित्र हाम्रो इतिहास हेर्न ! बिहान खाना खाएर राजदेवी बाट जंगलै जंगल उकालो चढियो ! बाँकी कुरा फोटोहरुबाट प्रस्ट पार्ने कोशीस गर्छु है त ! मकवानपुर गढि प्रवेशव्दार यो, माटो को ढिस्को मुनि चाँहि उहिले राजा को 'सेतो हात्ति' गाडिएको थियो रे । पहिले त्यहाँमाथि एउटा साइनबोर्डमा लेखिएको थियो रे । दरबार प्रवेशव्दार, चारैतिर अग्ला पर्खाल, अनि पर्खाल बाहिर ठूला ठूला, गहिरा खाडलहरु । दरवार प्रवेश गर्ने यही एउटै मात्र ढो